BELEDWEYNE, Soomaaliya - Dagaal u dhaxeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda, ayaa ka dhacay shalay gelinkii dambe iyo saakay gobolka Hiiraan, kaasoo geystay khasaarooyin isagu jira dhimasho iyo dhaawac.
Mas'uuliyiinta maamulka gobolka ayaa xaqiijiyay in dagaalka uu yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerar gaadmo ah ku qaadey kolonyo militeri oo ay la socdeen ciidamada dowladda xilli ay marayeen inta u dhaxaysa tuulooyinka Butaale iyo Habiino oo hoos yimaada degmada Maxaas.
Xoogaga Al-Shabaab ayaa la sheegay in dagaalka looga awood roonaadey, islamarkaana lagu gaarsiiyay khasaarooyin kala duwan, intastoo tirada dhimashada aan wali la shaacin.
Maamulka HirShabeelle ayaa sheegay in xaaladda degaanka lagu dagaalamay ay degan tahay, iyadoo kolonyadii la weeraray ay gaareen degamada Maxaas oo saldhig ku leh ciidamada Itoobiya, ee aan qeybta ka ahayn AMISOM.
Ciidamo ka socda Jabuuti ayaa u qaabilsan AMISOM howlgalka Hiiraan.
Maxaas waxay kamid tahay goobaha ay go'doomisay Al-Shabaab kadib markii laga saarey 7 sano kahor, waxaana Kooxda ay jartay wadooyinkii isku xirayay degmooyinka gobolka Hiiraan, taasoo adkaysay isku socodka iyo ganacsiga.
Xaalad bini'aadanimo ayaa ka jirta xilliga gobolka, kadib markii ay ku dhufteen roobab xooggan oo sababay fatahaado saameeyay boqolaal kun oo qof, kuwaasoo deganaa magaaladda Beledweyne.
Dagaal fool-ka-fool ah ayaa ka dhacay goobta kaasoo ka dhashay khasaaro culus.
Weerar lagu dilay Askari ajnabi ah oo ka dhacay Hiiran
Soomaliya 24.08.2018. 16:25
Mareykanka oo shaaciyay go’aan dhiira-gelinaya Al-Shabaab
Soomaliya 25.12.2019. 15:45
Uganda oo ku dhawaaqay tiradda askar ay u soo direyso Soomaaliya
Soomaliya 07.12.2019. 11:31
Soomaaliya: Hogaanka AMISOM oo isbedel lagu sameeyay
Soomaliya 01.02.2018. 01:04